बालबालिकालाई मोटोपनको समस्याबाट कसरी बचाउने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
#corona new strain virus
#३ सदस्य मनोनित
#स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ बालबालिकालाई मोटोपनको समस्याबाट कसरी बचाउने ?
बालबालिकालाई मोटोपनको समस्याबाट कसरी बचाउने ?
डा. आरपी चौधरी बाल शल्य चिकित्सक तथा कार्यकारी निर्देशक, इशान महिला तथा बाल अस्पताल आईतबार, २०७७ मंसीर ७ गते, १०:५० मा प्रकाशित
सामान्यतयाः कुनैपनि बच्चाको तौल उसको उचाई र उमेरको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यसलाई बच्चामा भएको मोटोपन भनिन्छ । प्रायजसोः बालबालिकामा मोटोपनको समस्या ५/६ वर्षको उमेरदेखि नै सुरु हुने गरेको पाइन्छ । एक अध्ययनका अनुसार १० देखि १३ वर्षको उमेरबिच मोटोपनको समस्या देखिएको बालबालिकामा वयस्क अवस्थामा पनि मोटोपनको समस्या देखिने सम्भावना ८० प्रतिशत रहन्छ ।
कुनैपनि मानिसले शरीरको क्षमताभन्दा बढी क्यालोरीको सेवन गर्छ । त्यो खाना शरीरले राम्ररी पचाउन नसक्दा फ्याटको रुपमा शरीरमा जम्मा भएर बस्छ । अनि मोटोपनको समस्याले सताउँछ । पछिल्लो पटक कोरोना महामारीको कारण विभिन्न देशमा लकडाउन घोषणा भएसँगै बालबालिकामा मोटोपनको समस्या एक साझा समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
मोटोपन भएका व्यक्ति तथा बालबालिकामा अन्यको तुलनामा शारीरिक गतिविधि एवं क्रियाकलापमा कम सक्रिय हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुमा मुटु रोगदेखि कालान्तरमा गएर अन्य दिर्घरोगहरुको सम्भावना उच्च रहन्छ ।
यी कारण देखिन्छ बालबालिकामा मोटोपन
डाइटलाई मोटोपनको प्रमुख कारणमध्ये एक मानिन्छ । किनकी बालबालिकाहरु आफूलाई मनपरेको खाना नखाई बस्नै सक्दैनन् । उनीहरु सन्तुलित आहारभन्दा पनि बढी आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा जुनसुकै समयमा पनि खान तयार रहन्छन् । यस्तै, उनीहरु खाना, आलु, चिल्लो खानेकुरा, जङ्कफुड एवम् गुलियो खानाहरु बढी रुचाउँछन् । यस्ता बानीले पनि उनीहरुको शारीरिक तौल बढाउनमा मद्धत गर्छ ।
निस्क्रिय शारीरिक गतिविधि
लकडाउनको समयमा अधिकांश बालबालिका एकै कोठा या घरमा सिमित भए । विद्यालय, पार्क, खेलकुद क्षेत्र सबै बन्द र त्यहि माथि पनि एकै घरमा सिमित रहनुपर्दा एक किसिमले उनीहरुको शारीरिक गतिविधि नै ठप्प भएको छ । जसकारण पनि उनीहरुमा मोटोपनको समस्या व्याप्त रुपमा देखिएको छ ।
अन्य रोगको संक्रमण
शरीरमा अन्य केही रोग लागेको बालबालिकामा पनि लक्षण स्वरुप मोटोपनको समस्या देखिन्छ । रोगका कारण हर्माेनको गडबढी हुन गई उनीहरुमा मोटोपनको समस्या देखिने हुन्छ ।
केहि बालबालिका अल्छी हुन्छन् । यस्ता बालबालिका आफ्नो लामो समय इलेक्ट्रिक साधन(ग्याजेट÷टेलिभिजन, मोबाइल वा कम्प्युटर)मा व्यस्त हुन रुचाउँछन् । यसले पनि उनीहरुलाई मोटोपनको समस्यातर्फ धकेली रहेको हुन्छ ।
आणुवांशिक समस्या भनेको एक पुस्तामा देखिएको शारीरिक एवम् मानसिक समस्या अर्काे पुस्तामा पनि देखिने समस्या हो । तसर्थ मोटोपनको विभिन्न कारणमध्ये यो पनि एक हो । जसको आमाबाबु मोटा छन भने उनीहरुको सन्तानमा पनि सोहि समस्या देखिने सम्भावना ८० प्रतिशतसम्म रहन्छ ।
मोटोपनलाई रोक्न के गर्ने ?
सन्तुलित आहारको खुवाउने
आमाबाबुले बालबालिकाका लागि मिठोभन्दा पनि बढी स्वस्थकर खानामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, बालबालिकालाई अभिभावकले अड्कलेर सन्तुलित खाना प्रदान गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनैपनि अभिभावकले बच्चाको तौल र उमेर अनुसार कस्ता खाना कति र कसरी खुवाउने भन्नेबारे सम्बन्धित विज्ञ अर्थात्, पोषणविद्सँग सल्लाह लिनसपर्छ ।
शारीरिक गतिविधिमा सक्रिय गराउने
बच्चालाई मोबाइल तथा कम्प्युटरजस्ता एकै ठाउँमा बसेर खेल्ने सामाग्रीको उपलब्ध गराउनुको सट्टा उनीहरुलाई दौडने, उफ्रिने एवम् पसिना निस्कने जस्ता शारीरिक गतिविधि र खेलकुदमा संलग्न गराउनु पर्छ । जस्तोः साइकल, दौड, नाच, फुटबल आदि ।
मोटोपनको समस्या समाधानका लागि अपनाइने विभिन्न उपायमध्ये बेरियाट्रिक सर्जरी पनि एक हो । यसलाई तौल घटाउने शल्यक्रिया पनि भनिन्छ । हामीले खाने खाना निल्ने नली हुँदै सानो आन्द्राको ‘स्टोमेक’ नामक अंगमा गएर बस्छ । सो ‘स्टोमेक’ बढि खाना खाने र मोटा बच्चाका अन्य सामान्यको तुलनामा ठूलो हुन्छ ।
जसकारण उनीहरु जति खाएपनि नअघाउने हुन्छ । तसर्थ ल्याप्रोस्कोपी विधिद्धारा सो अंगलाई शल्यक्रियाको माध्यमद्धारा सानो बनाइन्छ । त्यसपछि उनीहरुलाई थोरै खाएपनि अघाउने हुन्छ । तसर्थ, यसैलाई नै बेरियाट्रिक सर्जरी भनिन्छ । यसप्रकारको सर्जरीका लागि आवश्यक अवस्थामा मात्रै चिकित्सकले सल्लाह दिने गर्दछ ।
कुनैपनि रोगको उपचार गर्नुपूर्व हामीले सो समस्या के कारणले देखियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । तसर्थ, यदि कुनैपनि बालबालिकामा हर्माेन गडबढीका कारण मोटोपनको समस्या देखिएको छ भने यसका लागि चिकित्सकको सल्लाहमा हर्माेन थेरापी पनि गराउन सकिन्छ ।
प्रस्तुतीः सृजना मगर
थप ४ जना संक्रमितको मृत्यु, १९६ बिरामी आइसीयु र भेन्टिलेटरमा
काठमाडौं उपत्यकामा २१८ सहित थप ३४८ जनामा कोरोना पुष्टि
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसीयूमा कार्यरत चिकित्सकमाथि हातपात
तेस्रो पटक काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न डा. माकाजुको अपारदर्शी दौड
नेपाल चिकित्सक संघ कोशीमा डा. सिलवाल समूहको बर्चस्व
थप ६ जना संक्रमितको मृत्यु, १९५ बिरामी आइसीयु र भेन्टिलेटरमा
१ को बन्दैछ स्वास्थ्य सचिव ?
२ अमेरिका र बेलायतको पूर्ण छात्रवृत्ति त्यागेर नेपालमै रमाएका डा. विश्वनाथ
३ आयोगले नेपाली सेना र केयुलाई सोध्यो, ‘मेडिकल कलेज सरकारी कि निजी हो ?’
४ बालबालिकाको छाती घ्यार–घ्यार किन हुन्छ ? यसबाट कसरी जोगाउने ?
५ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले निकाल्यो लाइसेन्स पाउनेहरूको लिष्ट (सूचीसहित)
६ ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमका लागि छानिए ५६९ नर्स (सूचीसहित)
७ तलब नदिएको भन्दै चिकित्सक आन्दोलित, प्रशासन भन्छ-३ दिनभित्र अस्पताल नआए बर्खास्त
को बन्दैछ स्वास्थ्य सचिव ?
विश्वमा साढे ९ करोडभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नियमित शारीरिक सम्बन्धले तपाईलाई बनाउँछ स्मार्ट
साइड इफेक्ट देखिएपछि क्याल्फोर्नियामा मोर्डनाको भ्याक्सिनमाथि रोक
संवाददाता पदमराज भट्ट